Fomba 4 hanohanana ny Global Voices (sy irariantsoa taombaovao!) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2020 16:58 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, اردو, Español, বাংলা, English
(Lahatsoratra tamin'ny volana Desambra 2010)
Raha mamaky ity ianao dia azo inoana fa efa naman'ny Global Voices izay mino ny iraka ataonay hanamafisana ny feo tsy heno any amin'ny fampitam-baovao mahazatra, mba ahafahan'ny olom-pirenena manerantany mampiasa fitaovana anjotra handraisana anjara feno amin'ny fiainan'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo, sy amin'ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahazoana miditra malalaka amin'ny fampahalalam-baovao an-jotra. Raha izany no izy dia tianay ny haka fotoana kely amin'ity andro faran'ny taona 2010 ity mba hisaorana anao noho ny fanohananao, ary raha mety dia hanomezana fomba hafa hanampianao anay amin'ny asa ataonay:
Manaova fanomezana: Tsara vintana izahay ato amin'ny Global Voices mandray fanohanana avy amin'ireo fikambanana mpanohana ara-bola lehibe izay matoky tanteraka ny zavatra ataonay. Tahaka ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa rehetra, na izany aza, dia mitady fomba hatrany izahay hiantohana fa mandeha sy mivoatra hatrany ary hanohana ireo zava-baovao sy ireo tetikasa tsy miankina izay mety tsy ho vitan'ny orina mpanasoa ny mamatsy vola azy. Ampahany lehibe amin'izany ezaka izany ny fanentanana ataonay amin'ny fanangonam-bola amin'ny faran'ny taona, ka tena zava-dehibe ho anay tokoa ny fanohanana ara-bola avy amin'ny namanay sy ny mpamaky, raha tsy hilaza hoe tena ankasitrahana tokoa izany! Tsy misy hetra ny fanomezana ho an'ny mpandoa hetra any Etazonia, ary mitondra anay manakaiky kokoa ny tanjonay amin'ity taona ity ianao androany raha manolotra ny anjaranao (31 Desambra).
Aelezo ny votoatinay: Miharihary izany— tsy feno ny tanjonay hanamafisana ny feo avy amin'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra manerantany raha tsy ren'ny olona betsaka araka izay azo atao, ary miantehitra amin'ireo namanay sy ny mpamaky anay izahay hizara ny lahatsoratray any alavitra sy midadasika. Ahafahanao mandefa mailaka na mandefa rohy mankany amin'ny tantaranay any amin'ny Twitter, Facebook ary ny tranokala tambajotra sosialy hafa miaraka amin'ny tsindry bokotra iray ny rohy “aparitaho” etsy ankila isaky ny lahatsoratra, ary manao izay hahamora ny fikirakirana izany izahay hielezany amin'ny fomba tsotra kokoa. Vao mainka mientanentana izahay raha, rehefa avy namaky ny lahatsoratray ianao, ampahafantarinao anay ny hevitrao etsy amin'ny fametrahana hevitra eto amin'ny tranonkala, amin'ny pejinay Facebook, na amin'ny Twitter (@globalvoices izahay – ny fizarana hafa sy ny ankamaroan'ny tranokalanay amin'ny fiteny hafa dia manana kaonty Twitter ihany koa).
Miaraha-miasa aminay: Ry media mpamoaka vaovao, fantatrareo ve fa azo averina avoaka maimaim-poana any amin'ny tranonkala/gazety/fantson'horonantsary ny lahatsoratray? Ny hanondroanao izay nanoratra sy ny tranonkala niaviany mifanaraka amin'ny politikanay amin'ny fanomezana alàlana ny hany angatahinay. Liana amina karazana fiaraha-miasa hafa ihany koa izahay, toa ilay natombokay tamin'ity taona ity niaraka tamin'ny The Economist, na ilay iray izay novolavolain'ny ekipa mpandika teny Italiana niaraka tamin'ny gazety Italiana isan'andro La Stampa. Raha liana te hiara-hiasa aminay ianao dia mandefasa mailaka any amin'ny Talen'ny Famoahana Lahatsoratra.
Miaraha aminay: Bilaogera ve sa mpandika teny ianao ary te hanampy anay hanatsara ny fitantaranay any amin'ny faritra misy anao na ny fiteninao? Tongasoa eto amin'ny Global Voices ianao raha izany! Azafady mifandraisa amin'ny toniandahatsoratra tompon'andraikitra ato amin'ny pejy ifandraisana aminay, ary handefa ny antsipiriany momba ny lahatsoratra andraisana anjara izy mamintina ny asa avy amin'ny tontolon'ny bilaogin'ny firenenao na mandika ny lahatsoratra amin'ny fiteninao.
Nanampy ny taona 2010 ho taona fahenina nijoroanay ny fanohananao, taona iray hafa lehibe ho an'ny Global Voices, ary tena mankasitraka izany izahay. Mirary ny taona 2011 ho anareo rehetra mba hilamina, hisy fifaliana, ary hifandray manerantany izahay !